Yehowa Ma Yehu Yɛn Nna Kan
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | November 15, 2001
“Ma yenhu yɛn nna kan sɛ ɛte, na yɛanya nyansa koma.”—DWOM 90:12.
1. Dɛn nti na ɛfata sɛ yɛsrɛ Yehowa ma ɔkyerɛ yɛn “yɛn nna kan”?
YEHOWA NYANKOPƆN ne yɛn Bɔfo ne yɛn Nkwamafo. (Dwom 36:9; Adiyisɛm 4:11) Enti obiara nni hɔ a obetumi akyerɛ sɛnea yɛde yɛn nkwa mfe bedi dwuma nyansam asen ɔno. Ɛnde, na ɛfata sɛ odwontofo no srɛɛ Onyankopɔn sɛ: “Ma yenhu yɛn nna kan sɛ ɛte, na yɛanya nyansa koma” no. (Dwom 90:12) Akyinnye biara nni ho sɛ ɛfata sɛ yesusuw Dwom 90, baabi a yehu saa adesrɛ no, ho yiye. Nanso, nea edi kan no, ma yɛnhwehwɛ dwom a Onyankopɔn ma wɔkyerɛwee yi mu nsɛm mu kakra.
2. (a) Hena na wɔabɔ ne din sɛ ɔhyehyɛɛ Dwom 90, na ɛbɛyɛ sɛ wɔkyerɛw no bere bɛn? (b) Ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ Dwom 90 ka adwene a yɛwɔ wɔ nkwa ho?
2 Asɛm a ɛwɔ Dwom 90 atifi no frɛ no nokware Nyankopɔn nipa “Mose mpaebɔ.” Esiane sɛ dwom yi si nnipa nkwa nna a ɛyɛ tiaa so dua nti, ɛda adi sɛ wɔkyerɛw no bere a wogyee Israelfo fii Misraim nkoasom mu no akyi, wɔ wɔn mfirihyia 40 sare so akwantu no mu, bere a awo ntoatoaso a wonni gyidi no mu mpempem pii wuwui no. (Numeri 32:9-13) Sɛnea ɛte biara no, Dwom 90 da no adi sɛ nnipa a wɔnyɛ pɛ nkwa yɛ tiaa. Ɛnde, ɛda adi pefee sɛ, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn nna a ɛsom bo no di dwuma nyansam.
3. Dwom 90 mu nsɛntitiriw ne dɛn?
3 Dwom 90 nkyekyɛm 1kosi 6 ka Yehowa ho asɛm sɛ yɛn guankɔbea. Nkyekyɛm 7 kosi 12 kyerɛ nea yehia na ama yɛde yɛn nkwa mfe a etwam ntɛmntɛm no adi dwuma wɔ ɔkwan a ɛsɔ n’ani so. Na sɛnea wɔada no adi wɔ nkyekyɛm 13 kosi 17 no, yefi komam pɛ sɛ yenya Yehowa adɔe ne ne nhyira. Nokwarem, sɛ́ Yehowa nkoa no, dwom yi mfa yɛn ho sɛ ankorankoro. Nanso, ɛsɛ sɛ yɛn ankasa susuw nsɛm a ɛwɔ mpaebɔ no mu no ho yiye. Enti sɛ́ nnipa a yɛahyira yɛn nkwa so ama Onyankopɔn no, momma yɛnhwehwɛ Dwom 90 mu nkɔ akyiri.
4-6. Ɔkwan bɛn so na Yehowa yɛ yɛn “guankɔbea”?
4 Odwontofo no de nsɛm yi na efi ase sɛ: “[Yehowa, “NW”], wo na woayɛ yɛn guankɔbea, awo ntoatoaso nyinaa mu. Wo de, wonnya nwoo mmepɔw na wunnya nyii asase ne wiase adi no, na wufi tete akyirikyiri kosi daakye akyirikyiri yɛ Onyankopɔn [anaa, Ɔsorosoroni].”—Dwom 90:1, 2, NW ase hɔ asɛm.
5 Yɛn fam no, “daa Nyankopɔn,” Yehowa, yɛ “guankɔbea”—honhom fam guankɔbea. (Romafo 16:26) Yɛte nka sɛ yɛwɔ ahobammɔ efisɛ ɔwɔ hɔ bere nyinaa a ɔbɛboa yɛn sɛ “mpaebɔ tiefo.” (Dwom 65:2) Esiane sɛ yɛde yɛn dadwen to yɛn soro Agya no so denam ne Dɔba no so nti, ‘Onyankopɔn asomdwoe a ɛtra adwene nyinaa so no hwɛ yɛn koma ne yɛn adwene so.’—Filipifo 4:6, 7; Mateo 6:9; Yohane 14:6, 14.
6 Yɛwɔ honhom fam ahobammɔ, efisɛ wɔ sɛnkyerɛnne kwan so no, Yehowa yɛ yɛn “guankɔbea.” Ɔma yɛn “mpia” nso—ɛbɛyɛ sɛ ɛne ne nkurɔfo asafo ahorow wɔ abusuabɔ a emu yɛ den—sɛ honhom fam guankɔbea, baabi a ahwɛfo a wɔwɔ dɔ boa kɛse ma yenya ahobammɔ. (Yesaia 26:20; 32:1, 2; Asomafo no Nnwuma 20:28, 29) Afei nso, yɛn mu binom fi mmusua a wofi bere tenten asom Onyankopɔn mu na wɔn ankasa ahu sɛ ɔyɛ ‘guankɔbea wɔ awo ntoatoaso nyinaa mu.’
7. Ɔkwan bɛn so na ‘wɔwoo’ mmepɔw na ‘woyii asase adi’?
7 Ná Yehowa wɔ hɔ ansa na ‘wɔrewo’ mmepɔw anaasɛ wɔreyi asase adi. Wɔ nnipa ani so no, na egye mmɔdenbɔ kɛse na ama wɔabɔ asase yi ne ɛso nneɛma nyinaa, nnuru a ɛwɔ so, ne sɛnea ɛso nneɛma yɛ adwuma ma ɛyɛ nwonwa no. Na bere a odwontofo no kae sɛ ‘wɔwoo’ mmepɔw na ‘woyii asase adi’ no, na ɔrekyerɛ obu kɛse wɔ adwuma kɛse a Yehowa yɛe bere a na ɔrebɔ saa nneɛma yi no ho. So ɛnsɛ sɛ yenya obu ne anisɔ a ɛte saa ara wɔ Ɔbɔadeɛ no nsa ano adwuma ho?
Yehowa Wɔ Hɔ Ma Yɛn Bere Nyinaa
8. Asɛm a ɛne sɛ Yehowa Nyankopɔn ‘fi tete akyirikyiri kosi daakye akyirikyiri’ no kyerɛ dɛn?
8 Odwontofo no too dwom sɛ: “Wufi tete akyirikyiri kosi daakye akyirikyiri yɛ Onyankopɔn.” “Akyirikyiri” no betumi akyerɛ nneɛma a ɛwɔ awiei nanso wɔnkyerɛɛ bere tenten pɔtee a ebedi. (Exodus 31:16, 17; Hebrifo 9:15) Nanso, wɔ Dwom 90:2 ne Hebri Kyerɛwnsɛm no mu mmeae foforo de, “akyirikyiri” no kyerɛ “daa.” (Ɔsɛnkafo 1:4) Yɛrentumi nte nea enti a Onyankopɔn te hɔ daa no ase. Nanso, Yehowa nni mfiase na ɔrennya awiei. (Habakuk 1:12) Ɔbɛtra ase bere nyinaa, na wayɛ krado sɛ ɔbɛboa yɛn.
9. Dɛn na odwontofo no de mfirihyia apem a nnipa de tra ase totoo ho?
9 Wɔde honhom kaa odwontofo no ma ɔde mfirihyia apem a nnipa de tra ase no totoo sɛnea ɛyɛ tiaa wɔ Ɔbɔadeɛ a ɔte hɔ daa ani so no ho. Bere a ɔrekasa akyerɛ Onyankopɔn no, ɔkyerɛwee sɛ: “Woma ɔdesani dan mfutuma, na wuse: Onipa mma, monsan mmra. Na mfirihyia apem yɛ w’ani so sɛ nnɛra da a etwaa mu ne anadwo mu dasu.”—Dwom 90:3, 4.
10. Ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn ma onipa “dan mfutuma”?
10 Onipa tumi wu, na Onyankopɔn ma no “dan mfutuma.” Kyerɛ sɛ, onipa san ‘kɔ dɔte mu,’ te sɛ dɔte a wɔabubu, anaa dɔte a wɔayam no muhumuhu. Sɛnea ɛte no, Yehowa ka sɛ: ‘San kɔ dɔte a woyii wo fii mu no mu.’ (Genesis 2:7; 3:19) Eyi fa obiara ho—wɔn a wɔyɛ den anaa wɔn a wɔyɛ mmerɛw, adefo anaa ahiafo—efisɛ onipa a ɔnyɛ pɛ biara nni hɔ a ‘obetumi agye onua, anaasɛ wama Onyankopɔn ne mpatade, na wama watra ase daa.’ (Dwom 49:6-9) Nanso, hwɛ aseda a yɛde ma sɛ ‘Onyankopɔn de ne Ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ogye no di no anyera, na wanya daa nkwa’!—Yohane 3:16; Romafo 6:23.
11. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ bere a ɛyɛ tenten wɔ yɛn ani so no yɛ tiatiaa wɔ Onyankopɔn ani so?
11 Wɔ Yehowa ani so no, Metusala mpo a odii mfirihyia 969 no anni da koro.(Genesis 5:27) Mfirihyia apem te sɛ nnɛra—nnɔnhwerew 24—a etwaam wɔ Onyankopɔn ani so. Odwontofo no kae nso sɛ mfirihyia apem te sɛ nnɔnhwerew anan a ɔwɛmfo de wɛn nsra mu anadwo no. (Atemmufo 7:19) Ɛnde, ɛda adi pefee sɛ bere a ɛyɛ tenten wɔ yɛn ani so no yɛ tiatiaa koraa wɔ Yehowa Nyankopɔn a ɔte hɔ daa no ani so.
12. Ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn ma nnipa ‘sen kɔ’?
12 Nea ɛne Onyankopɔn a ɔte hɔ daa no bɔ abira no, nnipa nkwa nna a ɔwɔ mprempren no yɛ tiaa ankasa. Odwontofo no kae sɛ: “Woma wɔsen kɔ sɛ sunsuansu, wɔyɛ ɔdae, anɔpa wɔfefɛw sɛ wura, anɔpa ɛyɛ frɔmfrɔm na ɛfefɛw, anwummere wotwa, na atwintwam.” (Dwom 90:5, 6) Mose huu Israelfo mpempem pii wu wɔ sare no so, Onyankopɔn ma ‘wɔsen kɔe’ sɛnea nsu yiri faa wɔn. Wɔakyerɛ dwom no fã yi ase sɛ: “Wopra nnipa kɔ sɛ nea wɔadeda wɔ owu mu.” (New International Version) Nanso, nnipa a wɔnyɛ pɛ nkwa nna te sɛ bere tiaa mu ‘nna’—wɔde toto anadwo nkotɔ kɛkɛ ho.
13. Ɔkwan bɛn so na ‘yɛte sɛ sare,’ na ɛsɛ sɛ eyi ka yɛn nsusuwii dɛn?
13 Yɛte sɛ ‘sare a ɛyɛ frɔmfrɔm anɔpa’ na ebedu anwummere na owia hyew a ano yɛ den ama atwintwam. Yiw, yɛn nkwa yɛ tiaa te sɛ sare a ekisa da koro. Enti, mommma yɛnnsɛe ademude a ɛsom bo yi. Mmom no, ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ ɔkwan a yɛbɛfa so de yɛn mfe a aka wɔ nneɛma nhyehyɛe yi mu no adi dwuma ho akwankyerɛ fi Onyankopɔn hɔ.
Yehowa Boa Yɛn Ma ‘Yehu Yɛn Nna Kan’
14, 15. Mmamu bɛn na Dwom 90:7-9 nyae wɔ Israelfo so?
14 Te sɛ nea odwontofo no rekasa kyerɛ Onyankopɔn no, ɔde kaa ho sɛ: “Yɛresa w’abufuw mu, na yɛahyew w’abufuhyew no ano. Wode yɛn amumɔyɛ asi w’anim, wode yɛn kokoam bɔne aba w’anim hann no mu. Na yɛn nna nyinaa twam kɔ w’abufuw mu, yɛhwere yɛn mfe sɛ asutu bi.”—Dwom 90:7-9.
15 Israelfo a wonni gyidi no ‘sae Onyankopɔn abufuw mu.’ ‘N’abufuhyew haw wɔn,’ anaa ‘n’abufuw yii wɔn hu.’ (New International Version) Esiane Onyankopɔn atemmu nti “wɔdwɛree” ebinom wɔ “sare so.” (1 Korintofo 10:5) Yehowa ‘de wɔn amumɔyɛ sii n’anim.’ Obuu wɔn atɛn wɔ wɔn baguam amumɔyɛ ho, na ɔde wɔn “kokoam bɔne,” anaa bɔne a wɔayɛ asie baa n’anim wɔ hann mu. (Mmebusɛm 15:3) Sɛ́ mma a Onyankopɔn bo afuw wɔn no, Israelfo a wɔannu wɔn ho no ‘hweree wɔn mfe sɛ asutu bi.’ Eyi nti, yɛn ankasa nkwa nna a ɛyɛ tiaa no te sɛ huhuw bi a efi yɛn anom, te sɛ asutu bi.
16. Sɛ ebinom reyɛ bɔne wɔ kokoam a, dɛn na ɛsɛ sɛ wɔyɛ?
16 Sɛ yɛn mu bi yɛ bɔne kokoam a, yebetumi de nneyɛe a ɛte saa no asie yɛn yɔnko nnipa akosi bere bi. Nanso, yɛn nnebɔne a yɛde sie no ‘bɛda adi wɔ Yehowa anim hann mu,’ na yɛn nneyɛe no bɛsɛe yɛne no ntam abusuabɔ. Sɛ yɛbɛsan ne Yehowa anya abusuabɔ a, ebehia sɛ yɛbɔ mpae srɛ bɔne fafiri, yegyae yɛn mmarato no, na yɛde anisɔ gye Kristofo mpanyimfo honhom fam mmoa tom. (Mmebusɛm 28:13; Yakobo 5:14, 15) Hwɛ sɛnea ɛno bɛyɛ papa sen sɛ ‘yɛbɛhwere yɛn mfe sɛ asutu bi,’ ma asɛm aba daa nkwa anidaso a yɛwɔ no ho!
17. Nnipa dodow no ara nkwa nna te dɛn, na dɛn na ahyɛ yɛn asetra ma?
17 Ɛdefa nnipa a wɔnyɛ pɛ nkwa nna ho no, odwontofo no kae sɛ: “Yɛn mfirihyiam nna, emu wɔ mfe aduɔson, na sɛ ɛboro so a, na ɛredu aduɔwɔtwe, na emu ahoahoade yɛ ɔbrɛ ne ahuhude, na etwam ntɛmso, na yetu kɔ.” (Dwom 90:10) Nnipa dodow no ara nkwa nna yɛ mfirihyia 70, na bere a Kaleb dii mfirihyia 85 no, ɔkaa n’ahoɔden soronko no ho asɛm. Nnipa binom wɔ hɔ a wodi boroo saa, ebi te sɛ Aaron (123), Mose (120), ne Yosua (110). (Numeri 33:39; Deuteronomium 34:7; Yosua 14:6, 10, 11; 24:29) Nanso, awo ntoatoaso a na wonni gyidi a wofii Misraim no de, wɔn a na wɔadi mfirihyia 20 rekɔ no wuwui mfirihyia 40 mu. (Numeri 14:29-34) Ɛnnɛ, wɔ aman pii mu no, nnipa dodow no ara nkwa nna te sɛ nea odwontofo no kae no. “Ɔbrɛ ne ahuhude” ahyɛ yɛn mfirihyia nna no mu ma. Etwam ntɛm so, “na yetu kɔ.”—Hiob 14:1, 2.
18, 19. (a) ‘Sɛ́ yebehu yɛn nna kan, na yɛanya nyansa koma’ no kyerɛ dɛn? (b) Nyansa a yɛde bedi dwuma no bɛka yɛn ma yɛayɛ dɛn?
18 Odwontofo no toaa so sɛ: “Hena na ohu w’abufuw ano den a ɛyɛ, ne w’anibere, sɛ wo ho suro te? Ma yenhu yɛn nna kan sɛ ɛte, na yɛanya nyansa koma.” (Dwom 90:11, 12) Yɛn mu biara nni hɔ a onim Onyankopɔn abufuw ano den anaa baabi a n’anibere kodu, na ɛsɛ sɛ eyi ma yenya ne ho suro pa kɛse. Nokwarem no, ɛsɛ sɛ ɛkanyan yɛn ma yebisa no ‘sɛnea yebetumi ahu yɛn nna kan, na ama yɛanya nyansa koma.’
19 Odwontofo no nsɛm no yɛ mpaebɔ a ɛkyerɛ sɛ Yehowa kyerɛkyerɛ ne nkurɔfo sɛnea ɛbɛma wɔde nyansa adi dwuma wɔ ɔkwan a wɔbɛfa so abu wɔn nkwa nna a aka ano na wɔde adi dwuma wɔ ɔkwan a ɛsɔ Onyankopɔn ani so. Nnafua bɛyɛ 25,500 na ɛwɔ nkwa nna a ne tenten yɛ mfirihyia 70 mu. Nanso, ɛmfa ho mfe a yɛadi no, ‘yennim nea ɛbɛba ɔkyena, efisɛ yɛyɛ huruhurow a eyi ne ho kakra, na afei ɛyera.’ (Yakobo 4:13-15) Esiane sɛ ‘ɛbere ne asiane to yɛn nyinaa’ nti, yentumi nkyerɛ bere tenten a yɛbɛtra ase. Enti, momma yɛmmɔ mpae nhwehwɛ nyansa a yɛde begyina sɔhwɛ ahorow ano, na yɛde ne nnipa foforo adi nsɛm wɔ ɔkwan a ɛfata so, na yɛde ayɛ nea yebetumi biara wɔ Yehowa som adwumam mprempren—ɛnnɛ! (Ɔsɛnkafo 9:11; Yakobo 1:5-8) Yehowa nam N’asɛm, ne honhom, ne n’ahyehyɛde no so kyerɛ yɛn kwan. (Mateo 24:45-47; 1 Korintofo 2:10; 2 Timoteo 3:16, 17) Nyansa a yɛde bedi dwuma bɛka yɛn ma ‘yɛahwehwɛ Onyankopɔn Ahenni kan’ na yɛde yɛn nna adi dwuma wɔ ɔkwan bi so a ɛbɛhyɛ Yehowa anuonyam na ama ne koma ani agye. (Mateo 6:25-33; Mmebusɛm 27:11) Nokwarem no, koma nyinaa mu a yebefi asom no no renyi yɛn haw ahorow nyinaa mfi hɔ, nanso ɛma yenya anigye kɛse.
Yehowa Nhyira Ma Yenya Anigye
20. (a) Ɔkwan bɛn so na ‘ade yɛ Onyankopɔn mmɔbɔ’? (b) Sɛ yɛyɛ bɔne a anibere wom na yenu yɛn ho nokwarem a, ɔkwan bɛn so na Yehowa ne yɛn bedi?
20 Sɛ yebetumi anya anigye wɔ yɛn nkwa nna a aka nyinaa mu a, hwɛ sɛnea anka ɛbɛyɛ fɛ! Eyi mu no, Mose srɛe sɛ: “[Yehowa, “NW”], san w’akyi,—ɛno, da bɛn ara?—Na ma wo nkoa ade nyɛ wo mmɔbɔ. Fa w’adɔe [anaa, nokware dɔ] ma yɛmmee nhema, na yɛadi ahurusi, na yɛn ani agye yɛn nna nyinaa mu.” (Dwom 90:13, 14; NW ase hɔ asɛm) Onyankopɔn nni mfomso. Nanso, ‘ade yɛ no mmɔbɔ’ na ‘ɔsan n’akyi’ fi n’abufuw ne asotwe a ɔde ma ho bere a kɔkɔbɔ a ɔde ma wɔ adeyɛ a ɛte saa ho no ma nnebɔneyɛfo a wɔanu wɔn ho no sakra wɔn abrabɔ ne wɔn nneyɛe no. (Deuteronomium 13:17) Sɛ yɛyɛ bɔne a anibere wom mpo na yɛda nokware ahonu adi a, Yehowa ‘nam n’adɔe so bɛma yɛamee,’ na yebenya biribi agyina so ‘adi ahurusi.’ (Dwom 32:1-5) Na sɛ yɛfa trenee kwan so a, yebehu nokware dɔ a Onyankopɔn wɔ ma yɛn no, na yebetumi ‘agye yɛn ani yɛn nna nyinaa mu’—yiw, yɛn nkwa nna a aka nyinaa mu.
21. Ebetumi aba sɛ dɛn na na Mose nam nsɛm a ɛwɔ Dwom 90:15, 16 so resrɛ?
21 Odwontofo no fi komam bɔɔ mpae sɛ: “Ma yɛn ho nsan yɛn, sɛ nna a wobrɛɛ yɛn ase wɔ mu ne mfe a yehuu mu bɔne no. Ma w’adwuma nna adi mma wo nkoa, na w’anuonyam nna adi wɔn mma so.” (Dwom 90:15, 16) Ebetumi aba sɛ na Mose resrɛ Onyankopɔn sɛ onhyira Israelfo mma wɔn ahurusidi ne nna ne mfe dodow a wohuu amane no nhyia anaa ɛnyɛ pɛ. Ɔsrɛe sɛ Onyankopɔn ‘adwuma’ a ɛyɛ hyira a obehyira Israelfo no nna adi mma N’asomfo no nhu na N’anuonyam nna adi wɔ wɔn mma, anaa wɔn asefo so. Yebetumi abɔ mpae ma afata sɛ wonhyira adesamma asoɔmmerɛfo wɔ Onyankopɔn wiase foforo a wɔahyɛ ho bɔ no mu.—2 Petro 3:13.
22. Sɛnea Dwom 90:17 kyerɛ no, dɛn na yebetumi abɔ ho mpae ma afata?
22 Dwom 90 de adesrɛ yi ba awiei sɛ: “[Yehowa, “NW”] yɛn Nyankopɔn animtew mmra yɛn so, na yɛn nsa ano adwuma no, ma ɛnyɛ yiye mma yɛn, yiw, yɛn nsa ano adwuma na ma ɛnyɛ yiye.” (Dwom 90:17) Saa nsɛm yi da no adi sɛ yebetumi abɔ mpae ma afata sɛ Onyankopɔn nhyira yɛn mmɔdenbɔ so wɔ ne som adwuma mu. Sɛ́ Kristofo a wɔasra wɔn anaa wɔn ahokafo, “nguan foforo” no, ɛyɛ yɛn anigye sɛ ‘Yehowa animtew’ wɔ yɛn so. (Yohane 10:16) Hwɛ sɛnea ɛyɛ yɛn anigye sɛ Onyankopɔn ama ‘yɛn nsa ano adwuma ayɛ yiye’ sɛ Ahenni adawurubɔfo ne nneɛma foforo mu!
Momma Yɛnkɔ so Nkan Yɛn Nna
23, 24. Ɔkwan bɛn so na yebetumi anya Dwom 90 ho a yebesusuw no so mfaso?
23 Ɛsɛ sɛ Dwom 90 ho a yɛasusuw yi ma yɛn ho a yɛde to Yehowa, yɛn “guankɔbea,” so no mu yɛ den. Sɛ yesusuw emu nsɛm a ɛfa tiaa a nkwa yɛ no ho a, ɛsɛ sɛ ɛma yehu hia a Onyankopɔn akwankyerɛ a yɛde bɛkan yɛn nna no ho hia kɛse. Na sɛ yɛkɔ so yere yɛn ho hwehwɛ Onyankopɔn nyansa na yɛde di dwuma a, yɛwɔ awerɛhyem sɛ yɛn nsa bɛka Yehowa adɔe ne ne nhyira.
24 Yehowa bɛkɔ so akyerɛ yɛn sɛnea ɛsɛ sɛ yɛkan yɛn nna. Na sɛ yetie n’akwankyerɛ a, yebetumi akɔ so akan yɛn nna akosi daa. (Yohane 17:3) Nanso, sɛ yɛbɛkɔ so anya daa nkwa ho anidaso a, ɛsɛ sɛ Yehowa yɛ yɛn guankɔbea. (Yuda 20, 21) Sɛnea yebehu wɔ asɛm a edi hɔ mu no, wɔakyerɛkyerɛ asɛm yi mu fann wɔ Dwom 91 mu nsɛm a ɛhyɛ nkuran no mu.
•Ɔkwan bɛn so na Yehowa yɛ yɛn “guankɔbea”?
•Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Yehowa ayɛ krado bere nyinaa sɛ ɔbɛboa yɛn?
•Ɔkwan bɛn so na Yehowa boa yɛn ‘ma yɛkan yɛn nna’?
•Dɛn na ɛma yɛn ‘ani tumi gye yɛn nna nyinaa mu’?
Ná Yehowa yɛ Onyankopɔn ‘ansa na wɔrewo mmepɔw’
Wɔ Yehowa ani so no, Metusala a odii mfirihyia 969 no anni da koro
[Mfonini ahorow wɔ kratafa 14]
Yehowa ama ‘yɛn nsa ano adwuma ayɛ yiye’
Share Share Yehowa Ma Yehu Yɛn Nna Kan
w01 11/15 kr. 10-15
So Nkwagye Ho Anidaso Bi Wɔ Hɔ?
Yesu Gye Nkwa—Ɔkwan Bɛn So?
Nnipa Ɔpepem Pii Akyerɛ New World Translation Ho Anigye Wɔ Wiase Nyinaa
Wudi Nyaatwomyɛ Ho Dwuma Dɛn?
Skitefo Tete Mmere Mu Nnipa a Wɔn Ho Yɛ Nwonwa
Noa Gyidi Bu Wiase no Fɔ
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM November 15, 2001
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM November 15, 2001
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM November 15, 2001